Kuwedzera majoini majoini anounganidzwa pombi, iyo inogona kuderedza kutenderera, kuderedza ruzha, kudzivirira pombi sosi kubva kutanga-kumusoro mauto pamwe nesistimu surges, inodzosera kufamba uye kusanzwisisika kubva kurukova rwepombi. akaomeswa nesimbi waya yemhete pamakona maviri.
asi hadziganhurwe ku:
Commerce HVAC masisitimu
Maindasitiri epombi yekugadzira
Sewage kurapa zvidyarwa
Tsvina mvura masisitimu
Vibration kuzviparadzanisa nevamwe
Multiple elastomers anowanikwa
Zvidiki zviso zvakatarisana kumeso
Imwe kana akawanda-epamhepo magadzirirwo
Inoderedza pombi harmonics
Isu tinogara tichisimbisa kubatsirana.
tenda isu isu tichakubatsira iwe kuti uwane mamwe emusika migawo uye mikana yakawanda.
Kugara pamhando uye kusimudzira uchivimba nemusika wakanaka mukurumbira.
Yedu yekushandira chirevo ndechekuwana vatengi nekugadzira zvigadzirwa zvekutanga-mhando, yekutanga kirasi, yekutanga-kirasi masevhisi, yekutanga-kirasi manejimendi.
Nhoroondo Iyo imwe-arch pro ...
A-2 ~ Double Arch Rubber Kuwedzera Joint
Nhoroondo mbiri-arch chigadzirwa ...
Details Wide arch system ndeye ...
Nhoroondo The spool mhando rubb ...
Nhoroondo Yenyanzvi dzakabatana nd ...
Nhoroondo A control unit asse ...
Nhoroondo Rubber Pipe is e ...
Nhoroondo Iwo elastomers ari ...
"Attestation de conformité sanitaire" (ACS) Kubvumidzwa kweFrance kwakatangwa muna Nyamavhuvhu, 2020.
Iyo "Attestation de conformité sanitaire" (ACS) chiFrench chekunwa mvura chitupa icho chinoratidza kukodzera kwezvigadzirwa zvinosangana nemvura yakagadzirirwa kushandiswa kwevanhu. MunaAug, 2020, maererano nezvinodiwa nemutengi, isu takaronga ...
This June, EPDM yedu majoini majoini akapfuura bvunzo dzeSingapore SETSCO.
Nzira Yeyedzo: SS 375- Kukodzera kwezvinhu zvisina-simbi zvigadzirwa zvekushandisa mukutarisana nemvura yakagadzirirwa kushandiswa kwevanhu zvine chekuita nemhedzisiro yavo pamhando yemvura. 1) Chikamu 1: Rondedzero 2) Chikamu 2: Masampula ekuedza 3) Chikamu 2: 2: 1: Od ...
Musi waChikunguru.2,2019, takawana CE chitupa.
Musi waChikunguru.2,2019, takawana CE chitupa. Izvo zvinhu zvakakodzera ndezvekushanduka kukura anodurura rubhoti rakabatana, zvinhu EPDM pasi pekutarisirwa EN681-1 1996. Chirevo kwete: HST-JNLR2119062045 Yakadzama kuvakwa kwakadai sekutevera: Imwe arch flange rudzi yakasimudzwa kumeso / kumeso kumeso ..
Musi wa14 June wa1999, tawana zvitupa zveWhisas.
Iyo mvura inogona inogona yakakosha kune hutano hwevanhu. Kusvibiswa kwemvura ndicho chinhu chikuru chinogumbura muviri wevanhu. Kuvandudza mhando yemvura inogoneka yakakosha uye pamusoro yakakosha. Kazhinji, zviyero zvekuvandudza mvura inogona inogona kunge zvinotevera: Dziviriro ...